Budata Android Messages APK maka Android
Budata Android Messages
Budata Android Messages,
Ọ bụ ezie na ewu ewu nke ngwa izi ozi na nyiwe mkpanaka na-aga nihu na-abawanye, Google webakwara ngwa SMS nke ya, ozi gam akporo.
Ozi Android, nke dị iche na ngwa izi ozi nke anyị na-ejikarị na ekwentị anyị na nke na-arụ ọrụ na ịntanetị, bụ nke emepụtara dị ka ngwa izipu SMS na MMS mara mma. Ozi Android, nke ị nwere ike iji kama ngwa izi ozi nke gam akporo, bụ ngwa na-aga nke ọma nke dị mfe iji. Obere akara ukwu na ngwa ngwa ngwa nke ejiri ihe eji eme ihe chọọ ya mma nwere ike ịbụ otu nime ihe kpatara mmasị gị.
Mgbe ị wụnye ngwa, ị nwere ike iji ozi gị na-enweghị nsogbu nke ibufe ha na ngwa. Ị nwere ike idobe ozi mbata site na ịpị aka nri ma ọ bụ aka ekpe, ma ọ bụrụ na onye zitere gị anọghị na listi gị, ị nwere ike tinye ha na kọntaktị gị ngwa ngwa site na ịpị foto ha. Ị nwere ike iji Android Messages na udo nke uche nihi na ọ dịghị ihe na-efu na kpochapụwo ozi ngwa.
Ọ bụrụ na ike gwụ gị maka ngwa izipu SMS kpochapụwo nke gam akporo, ị nwere ike kenye ozi gam akporo, nke pụtara nọdịdị ya na ịdị mfe iji ya ugbu a, dị ka ngwa ozi ndabara. Ị nwere ike budata ozi Android nefu, dị na gam akporo 4.1 Jelly Bean na nelu.
Cheta na: Iji nwee ike iji ozi Android, a na-arịọ gị ka ịtọọ ngwa ahụ ka ọ bụrụ nke an-kpọ. Ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị ma emechaa, gaa na Ntọala> Ngwa wee chọta ozi Android wee jiri nhọrọ Clear Defaults.
Nime edemede a, anyị akọwara otu ị nwere ike isi gbochie SMS mgbasa ozi site na iji ngwa ozi gam akporo:
Otu esi egbochi ozi mgbasa ozi?
Android Messages Ụdịdị
WhatsApp Business (APK) bụ ozi izipu ego, na-akpọ ngwa nke na-enye ndị azụmaahịa ohere isoro ndị...
Site na nbudata ngwa ngwa mkparịta ụka Steam na ekwentị gam akporo gị, ịnwere ike ịnweta ndị enyi...
Facebook Ndewo guzo dị ka ngwa nkwukọrịta nke Facebook nyere naanị ndị ọrụ gam akporo. Nwere ike...
Site na ngwa weMessage, ị nwere ike nweta ngwa izi ozi iMessage na ngwaọrụ gam akporo gị. Ngwa...
Njikọ Njikọ Njikọ ahụ dị netiti ngwa izipu ozi nke gam akporo ekwentị na ndị ọrụ mbadamba nwere ike...
A na-akwadebe ngwa ngwa Waya dị ka ngwa izipu ozi ị nwere ike iji na ekwentị gam akporo gị na...
The MojiMe ngwa bụ otu nime ngwa na gam akporo ngwaọrụ ọrụ ndị na-ugboro ugboro na-eji WeChat ngwa...
Nchọgharị Orbitum bụ ngwa nchọgharị gam akporo dị mfe ma dịkwa mfe nke nwetagoro nnukwu ihe ịga nke...
Ngwa Bindle dị netiti ngwọta ndị ọzọ gam akporo ekwentị na ndị ọrụ mbadamba nwere ike iji rụọ ọrụ...
Nchọgharị dolphin so na ihe nchọgharị weebụ ebe ndị gam akporo ama na ndị mbadamba nkume nwere ike...
WeMail ngwa pụtara dị ka ọhụrụ na free e-mail ngwa na ị nwere ike iji na gị gam akporo smartphones...
LINE Lite bụ ngwa dị mfe nke ngwa ozi ngwa ngwa nefu LINE, nke nwere ọnụọgụ ndị ọrụ na obodo anyị....
WhatsApp Prime bụ otu nime ndị kacha ebudatara WhatsApp Mods nke ndị ọrụ ekwentị gam akporo. Ị...
Ngwa Signal so na ngwa izi ozi nefu na-enye ndị nwe gam akporo smartphone na mbadamba ohere iji...
Microsoft Kaizala bụ ngwa mkpanaaka emebere maka nzikọrịta ozi na njikwa azụmaahịa buru ibu. Ọ...
Azar bụ ngwa gam akporo gam akporo nke etinyegoro na nso nso a na ngwa ndị na-enye ọrụ nkata...
Tinder bụ otu nime ụzọ kachasị mma iji zute ndị enyi ọhụrụ maka onye ọ bụla. Ngwa ahụ na-arụ ọrụ...
WhatsApp Plus, nke enwere ike ibudata dị ka YOWhatsApp APK, bụ ngwa izi ozi efu na-enye atụmatụ dị...
Gmail Go bụ ụdị Gmail dị fechaa na ngwa ngwa, ngwa email etinyegoro na ekwentị gam akporo. Ọ bụrụ...
LINE whoscall bụ ihe mgbochi oku na-akwụghị ụgwọ yana ngwa igbochi SMS nke ụlọ ọrụ LINE ama ama...
Truecaller (Download) bụ ngwa na-egosi onye na ụlọ ọrụ a na-akpọ oku a na ekwentị gị ma chebe ya...
Google Duo bụ ngwa na-enye gị ohere ịme nkata vidiyo na kọntaktị gị na ekwentị gam akporo gị, ya...
Aloha Browser bụ ihe nchọgharị ịntanetị dị ngwa yana echekwara nke ị nwere ike ịhọrọ na ngwaọrụ...
Mail.Ru bụ weebụsaịtị ama ama na Russia. Nke a bụ ya ukara ngwa maka gam akporo ngwaọrụ. Mana ebe ọ...
Ọrụ dabere na ikpo okwu site na ihe nchọgharị weebụ nụdị Meebo na eBuddy. Ọ na-akwado Facebook...
Multi SMS & Group SMS bụ ngwa nkwurịta okwu gam akporo na-enye gị ohere iji ekwentị gam akporo...
Ngwa Mirrativ so na ngwaọrụ efu na-enye ohere ka ndị ọrụ Android smartphone na ndị na-ahụ maka...